Uchungechunge lwe-460SLM Swinging Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
I-460SLM Swinging Dragon® dredge ilungele ezemvelo, imigwaqo emincane yamanzi, namaphrojekthi wokwehla kwechibi. Le yunithi inikeza ukuguquguquka okuyingqayizivele ngamandla okusebenza njengokwakhiwa kwesitebhisi esishintshayo ukuze kusetshenziswe eziteshini ezincane noma njengokudonswa okuvamile lapho kudingeka ububanzi bokujula obubanzi. Kumodi yesitebhisi esiguqukayo, opharetha angabeka i-cutterhead ukuze isikwe ngokunemba nokusebenza kahle kokukhiqiza.
I-460SLM DREDGE IZINZUZO
Imodi yesilawuli sokushintshela ivumela ukusetshenziswa eziteshini ezincane futhi iqeda isidingo samakhebuli namahange.
Kuhlanganiswe kalula kusetshenziswa amathuluzi wesandla ajwayelekile kanye nokhishi basolwandle.
Ukuhamba ngomkhumbi okwakhelwe ngaphakathi komkhumbi kuthuthukisa ukuqhuma ngokushesha nangokunembile.
Usayizi Wokukhishwa: 12 ″ x 12 ″ (300 mm x 300 mm)
Injini Eyinhloko Isibungu C-15: 540 HP (402 kW)
Amandla @ Isinqe seDrayivu: 50 HP (37 kW)
Ubuningi Bokudonswa Okukhulu: 20 '(6 m)
I-pump handling crane.
Insika yokuzulazula namasiginali.
I-Stern jib crane yokukhipha ipayipi.
Isifudumezi segumbi le-lever kanye ne-air conditioner.
Izinketho ezingeziwe ziyatholakala uma ucelwa.